47th CIFF Guangzhou 2021 • မတ်လ 28-31
41 ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ နဂါး ပရိဘောဂ ပြပွဲ
Foshan Weierxin Safe စက်ရုံမှ လူတိုင်းအတွက် Kung Hei Fat Choy
ပျော်ရွှင်စရာ အမျိုးသမီးများနေ့ - Foshan Weierxin Safe စက်ရုံ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် 2021 ခုနှစ်၏ အဓိက ပရိဘောဂဒီဇိုင်းပွဲဖြစ်သည့် 47 ကြိမ်မြောက် China International Furniture Fair သည် ဒီဇိုင်းတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လက်ရှိဖြစ်ရပ်များနှင့် ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော စီးပွားရေးပုံစံသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
CIFF Guangzhou 2021 ကို ထုတ်ကုန်ကဏ္ဍအလိုက် စီစဉ်ကျင်းပသည့် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်- ပထမ၊ မတ်လ ၁၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ အိမ်သုံးပရိဘောဂများ၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်းနှင့် အိမ်အထည်အလိပ်၊ အပြင်ဘက်နှင့် အပန်းဖြေ ပရိဘောဂများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒုတိယ၊ မတ်လ ၂၈ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ရုံးသုံးပရိဘောဂ၊ လုပ်ငန်းသုံးပရိဘောဂ၊ ဟိုတယ်ပရိဘောဂနှင့် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းအတွက် စက်ပစ္စည်းနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ စုစုပေါင်း ဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ၇၅၀,၀၀၀ ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး Guangzhou ရှိ China Import and Export Fair Complex တွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၄,၀၀၀ နှင့် ကုန်သွယ်မှုဧည့်သည် ၃၀၀,၀၀၀ ကို လက်ခံကျင်းပရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရုံးခန်းပြပွဲကြီးဖြစ်သည့် Office Show သည် ဒုတိယအဆင့်တွင် ခေါင်းစဉ်ငယ်များဖြစ်သည့် အလုပ်ခွင်အတွက် စနစ်များနှင့် ထိုင်ခုံများ၊ smart office အတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများအပြင် အများသူငှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နေရာများနှင့် ကျောင်းများအတွက် ပရိဘောဂများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ CIFM/interzum Guangzhou 2021 သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များကို လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ၊ စက်ယန္တရားများ၊ ပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာပြင်များနှင့် ပရိဘောဂလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
1.Exhibition: မတ်လ 28 မှ 31 ရက် 2021 ခုနှစ်
2. Venue: တရုတ် သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် တရားမျှတသော Complex
Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည်ယခုနှစ်ပြပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံယူဆောင်လာသည်။
ဆိုရိုးစကားအတိုင်း "တရုတ်ပရိဘောဂတွေက Guangdong ကိုကြည့်တယ်၊ Guangdong ပရိဘောဂတွေက Foshan ကိုကြည့်တယ်"။ Foshan သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီပရိဘောဂစက်မှုလုပ်ငန်းစု၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးကျယ်ဆုံး၊ အရင့်ကျက်ဆုံးနှင့် အပြည့်စုံဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်ဖြစ်သည့် ပရိဘောဂထုတ်လုပ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းလည်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ "41st International Longjia Exhibition" အဖြစ် ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် "တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အတွက် ပထမဆုံးပြပွဲ" အဖြစ် Longjiang, Foshan တွင် စက်တင်ဘာ 13 မှ 16 ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံအသစ်နှင့် အကန့်အသတ်မဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပေါင်းစပ်မှု၊ မျှဝေခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝသော ကုန်သွယ်မှုပြပွဲသည် သင့်အား ပိုမိုကြီးမားသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းသည့် အတွေ့အကြုံသစ်ကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။1.Exhibition: စက်တင်ဘာ 13 မှ 16 ရက် 2021 ထိ2. Venue: Mayo CenterFoshan Weierxin Safe Co., Ltd တွင် ဤပြပွဲအတွက် ပြခန်း ၁ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံ ရောင်းအားပြင်းသော မော်ဒယ်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။
အားလုံးပဲ 2022 မှာ ကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ အမျိုးသမီးများနေ့ ဖြစ်ပါစေ။